काठमाडाैंलाई ‘हेट लेटर’
मैले तेरो नाडी राम्ररी छामेको छु । नाडी मात्रै के र ? तेरो पाईंनलाई पाईपाई कुल्चदैं/नाप्दै हिंडेको छु ।
मैले तेरो ढोकाहरुमा, सटरहरुमा छाद्दै हिंडेको छु । विग्रेको बिकार रगतको पाप्रा कटकटिएको साँप्रा देखाउँदै तैले नाङ्गो नाच देखाउँदा पनि मैले चुपचाप तेरो प्रशंसा गरेजस्तो गरेकै हो ।
तँजस्तीसँग समीप हुन खोज्नु भनेको मेरो स्वाभिमान र अस्मीतालाई तिलान्जली दिनु हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि एउटा झिनो आश थियो, कम्तिमा तैले मेरो मन बुझ्नेछस्, भावना बुझ्नेछस् । तर, तँ कहाँ मान्छेको मन, माया र भावना बुझ्ने खालको रहिछस् र ? हो, म खासमा भ्रममा रहेछु ।
रातभर नशाको सुरमा नाङ्गो नाच नाचेर बिहान पशुपतिमा पानी अचाउँन जाने गरेको खबरले भगवान कमरेड पनि दुखी भएको समाचार छ । ठमेल र दरवारमार्गको मार्केटले नपुगेर रत्नपार्क र वीरअस्पताल अगाडिको देहव्यापार निशेषको ब्यानरमुनि एक प्लेट मःममा एक रात सुत्ने सम्झौता गरेको टेपरेकर्ड अझै सुरक्षित छ मसँग । थापाथलीको बाग्मती नदी किनारको फेहोरको थुप्रोमा भेटिएको एक थान शिशू तेरै भएको प्रमाणित भईसक्दा पनि तँ निर्धक्क जिन्सपाईन्ट र टि–सर्टबीचको ट्याटुले कुमारी भएको प्रमाण दिन खोज्छेस् । छातीमा ‘क्याच ईट’ प्रिन्ट भएको टि–सर्टको अक्षर पढ्दा रिसाए जस्तो गरेको कुन चैं एकेडेमिक एजुकेशनले नबुझ्ला र ?
सिंहदरबार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मेरै गाउँकी डल्लीको खुन पिएर डकारेको आवाजलाई ‘मेन न्यूज’ बनाएर टिभीले छाद्दा, डल्लीकी आमा मुड्कीले छाती पिट्दै मझेरीमा ढल्दा ‘खुनपाने’हरुलाई ग्रिन लेबलको मातमा मस्त पार्दै आफ्नै खोकिलामा च्यापेर चुम्बन गर्ने तेरो आदतलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु ।
कहिले दिल्लीसँग त कहिले बेईजिङसँग लेपास्सिएर आफ्नो स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई तिलान्जली दिँदा गर्व गर्ने तेरो अहमता– मुर्दावाद । दिल्लीसँग उठवस गर्दा बेईजिङको विरोध, बेईजिङसँग सुत्दा दिल्लीको उछित्तो । घरेलुवालाको त बाल मतलबै छैन । उतातिरको संसर्गवालाको नासो तुहाउने केन्द्र बनाएको छेस्, तैले सिंहदरबार र बालुवाटारलाई ।
तेरो छातीको मोल कति हो ? सबका सब सुनेको छु मैले । जबानीको जति मोल पाउँन छाडेपछि भाउ घटाएकी छेस् रे ! त्यो फालिएको भ्रुणको दुर्गन्धले घरेलुहरु विमार परेका छन् ।
पानीको हाहाकारमा मान्छेको रगत पिउन उद्दत हुन थालेको छस् । बिजुली मारेर अपराध आफ्नै अंगको व्यापार गर्न पल्केको छस् । अंगको भाउ बढाएर गरिबको तिर्सनामाथि खेलबाड गरेको छस् ।
अनि, आफ्नै छातीको एयरपोर्ट भारतलाई भाडामा दिने निर्णय गर्दा स्वभिमानले चिमुर्किएको छाती नै फुलाउने दुष्प्रयास गरेको पनि कसले नबुझेको छ र ?
आफूले नभ्याएपछि घर चलाउन भाडामा कर्मचारी ल्याएको यहाँ कहाँ छिपेको छ र ? आफ्नै बारी रातविरात छिमेकीले लुछ्दा समेत आफ्नै मोलको चिन्तामा टुडिखेल र खुलामञ्चमा कुर्लेका बिषबमनबाट को विमुख छ र ?
आमा आँशुको दहमा डुब्दासमेत आफ्नै निकृष्ट व्यापारमा रम्न सक्ने तेरो कठोरता र अमानवीयता जगजाहेरै छ । पैसा र स्वार्थका निम्ति आफ्नै आमाको अंग र आमालाई बेच्न खोजेको तितो यथार्थ मेरो मानसपटलमा बारबार घुमिनै रहेको छ । तै पनि मैले तलाईं मन पराएँ । माया लाएँ । तलाईं सुधार्न सकिन्छ कि भनेर सक्दो प्रयास गरें । तर अहँ, मैले हार खाएँ । तसँग मस्ती गर्ने छिमेकीहरुले तँलाई फतलफाँडो पारिसकेँ । अब त तँ सप्रिन्छेस् भन्ने झिनो आशा पनि समाप्त भईसक्यो ।
आइ डन्ट लाईक काठमाडौं ।
आई हेट काठमाडौं ।
उहीं तँदेखि आजित